विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र आजबाट, सेवा कसरी लिने ? - Abhiyan news
विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र आजबाट, सेवा कसरी लिने ?
२१ श्रावण २०७८, बिहीबार ०२:४१ अभियान न्यूजLeaveaComment on विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र आजबाट, सेवा कसरी लिने ?
सरकारले अनलाइनबाट पनि विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट उपलब्ध हुने क्यूआर कोडसहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न अनलाइनमा गएर मागिएको विवरण भरेर आवश्यक कामगजात अपलोड गर्नु पर्नेछ ।
आजबाट यो सेवा सुरु भएको विभागले जनाएको छ । https://vaccine.mohp.gov.np/public-request-form मा गएर मागिएको विवरण अपलोड गर्नुपर्ने छ ।
तीनदिनभित्र विदेश जानेहरुका लागि थप कागजातहरु भिसाको छाया कपी, टिकटको छाया कपी पेश गर्नुपर्ने छ । यसैबीच, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र अबदेखि जिल्ला अस्पतालबाटै पाइने भएको छ । विदेश जाने व्यक्ति तथा विद्यार्थी सबैलाई काठमाडौंमै आएर खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन सकस भएपछि सरकारले सबै जिल्लाबाट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको हो ।
खनाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज
विद्युत प्राधिकरणले उद्योगलाई धराशायी बनाउन खोजेको आरोप
२२ भाद्र २०७८, मंगलवार ११:३४ अभियान न्यूज
गठबन्धनको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो
२४ भाद्र २०७८, बिहीबार १२:१७ अभियान न्यूज